Inhliziyo I-R&D - Nanchang Ever Bright Industrial Trade Co., Ltd.
Ibhodlela le-Aluminium Screw
I-Aluminium Beverage Can
Izindaba Zomkhiqizo Zakamuva
Izixazululo zokupakisha ezisimeme:I-eco eyengeziwe kanye nokumosha okuncane
Sineithimba lonjiniyela nabaklamingesipiliyoni esicebile
ezimbonini zokupakisha.Amaqembu ethu e-R&D kanye Nezokuthengisa atholaizixazululo ekugcineniukufeza izinhloso zakho.
Asifani nalutho uma kuziwa ekufakweni okusha, kunombono kuphela ovela kukhasimende.Amakhasimende angakhetha emaphaketheni ethu akhona noma asebenze nathi ukuze enze umklamo ongokwezifiso ngokuphelele.Noma vele usazise mayelana nemibono yakho nemigomo yephakheji oyifunayo, ungathola idizayini ngosuku olufanayo ngempendulo yethu esheshayo.
Kulesi sigaba, onjiniyela bethu bazosebenzisa imibono yakho ukuze ihleleke kangcono ngokuklama kwemishini nge-Pro-e noma i-Solidworks.Ukuthuthukiswa kuyaqhubeka nokucwengisiswa okwengeziwe kwendawo ye-3D kanye nokumodela okuqinile, bese sidlulela kumamodeli e-prototype kanye nemidwebo yomqondo wobuchwepheshe.I-R&D yethu ingakha idizayini efanelekile ngokusetshenziswa kwabathengi kanye nesikhalo seshelufu esicelweni sakho sophawu.
Uma umklamo wethu usuqinisekisiwe, ithimba lethu le-R&D lizokusiza ukuthi uqinisekise umqondo.Singathola amasampula asheshayo e-3D phakathi neviki elilodwa, bese izifaniso zokusebenza, ukuhlolwa kokuhambisana konke kuyingxenye ebalulekile kulesi sigaba.Futhi sizoqhubeka sithuthukisa idizayini size sifinyelele umgomo wakho.
Uma idizayini yakho idinga ukwakha isikhunta esisha, unjiniyela wethu angakwazi futhi ukusiza amakhasimende ethu ukuthi akhe umklamo wesikhunta.Uma imiqondo isiqinisekisiwe, singakwazi ukuqala ukwakha kanye nokuhlola ngaphambi kokukhiqiza ngobuningi. Futhi sisengakwazi ukufeza imiqondo yakho ngaphambi kokuqeda i-mald.
Okuhlangenwe nakho okucebile embonini yokupakisha, ejwayelene nazo zonke izinhlobo zenqubo yezobuchwepheshe njenge-extrusion yomthelela, isitembu sensimbi, umjovo wepulasitiki nokunye.Ujwayelene nazo zonke izinhlobo zenqubo yokwelashwa kwendawo efana ne-anodizing, imidwebo, i-laser etching nokunye.
Okuhlangenwe nakho okucebile ekufakweni kwebhrendi, ukwahlulela kobuhle okuvelele.Ujwayelene namathrendi okupakishwa ezimakethe ezahlukene.
ICALA LETHU LAkamuva Lomklamo